यस कारण लगाइयो वामदेवलाई बोल्न प्रतिबन्ध | abc.com.np
उपाध्यक्षमा विद्या भण्डारीलाई सभा सम्बोधनको जिम्मा दिएर ओलीले शंकर पोखरेललगायतलाई सभामा वक्तव्यका लागि भनेका छन् । वामदेवको वक्तव्यका कारण गुटमा समस्या आएको भन्दै शंकर र ईश्वर पोखरेलले ओलीसाग बामदेवलाई सार्वजनिक सभामा नजानका लागि भनेका थिए । अन्य नेताको सुझावअनुसार नै ओलीले वामदेवलाई सभामा नबोल्नका लागि सुझाव दिएका थिए । अहिले ओली गुटका सभामा वामदेवलाई बोल्न मौका नै छैन । ‘अघिल्लो महाधिवेशन, संसदीय दलको चुनावसम्म पनि हामी विरुद्ध खनिएकालाई सभामा प्रमुख अतिथि बनाउादा कार्यकर्ताले गन्दैनन् ।’,ओलीसागको भेटमा निकटवर्ती नेताहरुले भनेको उल्लेख गर्दै स्रोतले भन्यो,‘हामीले खटेर बनाएको पार्टी संगठनको क्रेडिट पनि हामीले पाउनुपर्छ ।’ त्यसो त एकथरी नेताहरुले ईश्वर पोखरेललाई पनि सभामा बोल्न दिन नहुने बताउन थालेका छन् । ईश्वरको छविका कारण गुटमा समस्या आएको भन्दै ओलीको कान फुक्ने काम शंकर आफैंले गरिरहेका छन् ।
नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने नै गणतन्त्रवादी ?
महाधिवेशन नजिकिादै गर्दा अहिले ०६५, १५ जेठमा मुलुकमा गणतन्त्र घोषणा गरिादा समर्थन गरेपनि पार्टीको वैठकमा नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने उदारवादी भएको आरोप लाग्न थालेको छ । माधव नेपाललाई राजालाई दाम चढाएको भनि प्रचार गर्ने ओली गुटका नेता विष्णु पौडेलले गणतन्त्र घोषणा हुादा नोट अफ डिसेन्ट लेखेको चर्चा एमालेभित्र बढेको छ । सतहसम्म पनि कसले लेख्यो गणतन्त्रमा नोट अफ डिसेन्ट भनि चर्चा हुन थालेको छ । ओलीको आदेशमा बालकोट दरबारमा भएको छलफलपछि गणतन्त्र घोषणामा असहमति जनाउन हस्ताक्षर गरियो । ओलीले गर्नुपर्ने हस्ताक्षर पौडेलले गरेका थिए । स्रोतका अनुसार गणतन्त्र स्वीकार गरेका नेताहरुलाई पार्टीमा पाखा लगाई गणतन्त्र विरोधीहरुलाई उचाल्ने काम भइरहेको छ । ओली गुटमा गणतन्त्रको विपक्षमा ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल उभिएका थिए । अहिले ओलीले उनैलाई च्यापेर उदार गणतन्त्रवादी बनेको परिचर्चा छ । गणतन्त्रको पक्षधर भएकाले संगठनको जोडघटाउका लागि ल्याइएका वामदेवलाई बोल्न रोकेर ओली गुट अघि बढ्न खोजिरहेको छ ।
गुट बलियो बनाउन प्पिएको जागिर
गृहमन्त्री वामदेव गौतमको सल्लाहकारका रुपमा एमाले नेता प्रदिप नेपाल तोकिएपनि उनको हैसियत मुख्य सहयोगीभन्दा माथि छैन । क्याविनेट मन्त्री पटक–पटक भएका नेपाल गौतमको पिए हुन गएको भन्दै अहिले एमालेभित्रै उनको आलोचना बढ्न थालेको छ । ‘विचारका क्रान्तिरकारी र सुधारका कुरा गर्ने अनि पाएपछि पिएको जागिर पनि नछाड्ने, यी कस्ता नेता ?’, एमाले स्रोतले भन्यो,‘हैसियत नै विर्सेर जागिर खान गएछन् ।’ ओलीको सिफारिसमा वामदेवले प्रदिपलाई पिएको जागिर दिएका हुन् । ओलीले गुट बलियो बनाउनका लागि प्रदिपको साथ लिएका थिए । त्यसो त एमालेभित्रै पनि ओली अध्यक्ष लड्दा महासचिवको उम्मेदवारका रुपमा लडेका प्रदिपको अवस्था देखेर ईश्वर पोखरेल यतिवेला खुसी भएका छन् । उनी फेरि महासचिव हुादैछन् तर आफ्ना प्रतिष्पर्धीलाई पिएको जागिर खाएको देख्दा उनले पनि कुरा काट्ने गरेका छन् ।
बोहरामाथि को–को खनिए ?
एमाले अनुशासन आयोग प्रमुख अमृतकुमार बोहरामाथि सचिव शंकर पोखरेललगायतका ओलीका निकटवर्तीहरु खनिएका छन् । बोहराले अनुशासन आयोगको नाममा आफ्नो गुटलाई हेला गरी माधव नेपालको गुटलाई सहयोग गरिरहेको विश्लेषण वालकोटमा हुन थालेको छ । बालकोट स्रोतका अनुसार अनुशासनका नाममा ओली समुहले गरेका प्रचारात्मक कामलाई गलत देखाएर सिधै प्रहार गर्ने कोशिश गरिएको छ । बोहराले अनुशासन आयोगको वैठक राखी नेताहरुलाई चेतावनी दिन थालेपछि ओली गुटका पोखरेलद्वय, विष्णु पौडेल, विद्या भण्डारीलगायत खनिएका थिए । एता, एमालेका भ्रातृ संगठनहरुमा पनि विभाजन देखिएको छ । अधिकांशका नेतृत्व ओलीको समर्थनमा रहेको बताइएपनि धेरैजसो माधव नेपालको सहयोगका लागि जुटेका छन् । ओली समुह मख्ख देखिएपनि पत्रकारहरुको संगठन प्रेस चौतारीमा देखिएको विभाजनले भने ओली समुहलाई पिरोलेको छ । ठूला, लेख्नसक्ने र लेखनमा दक्षता भएका चौतारीका नेताहरु माधव नेपालको पक्षमा उभिएपछि ठेक्कापट्टा गर्ने र केही झोले पत्रकारहरुलाई लिनु परेको भन्दै ओली गुट समस्यामा परेको छ ।